Ịtụ Egwu Ndị Ọzọ-Gịnị Bụ Ihe Nzuzo Ịlụso Ya ọgụ?
Edere site Tranquillus | Jan 20, 2018 | Mmepe onwe onye
Egwu na anya ndị ọzọ
Egwu nke ile ndị ọzọ anya, egwu na-abịaghachi mgbe mgbe. Anyị niile ebiela n'ọnọdụ ndị siri ike! Chọrọ ime ihe ọ bụla na ndụ gị? Ka ị na-ekwupụta onwe gị n'ihu ọha? Ma ọ bụ nanị ịjụ ajụjụ? Ma ọ bụ obere ma ọ bụ nnukwu omume, egwu a nwere ike ịlaghachi na-egbochi gị ma ghara ịhapụ gị ...
Nsogbu na-efe efe nke ọma ma ghọtara n'ụwa niile. O nwere ike inwe nsogbu ndị na-egbochi gị ịga n'ihu, ọ nwere ike mgbe ụfọdụ ịkachapu gị: gịnị bụ ihe nzuzo ịlụ ọgụ ya? Kedu ihe ọ ga - ewe iji merie ya ma nọgide na - abụ onwe gị?
Site na vidiyo 2 min a, ị ga-aghọta ihe mere, na njedebe, ọ nwere ike ịdị mfe imeri ya ma gaa n'ihu. Ụjọ na-abụkarị ihe e kere eke n'uche anyị, ihe efu, mee ka ụjọ ị na-atụ ndị ọzọ na-atụgharị uche gị.
Ihe ndị dị mfe ma dị mfe itinye n'ọnọdụ mgbe ị matara ha. Nabata usoro ihe a ma kpughee egwu gị. Kwe ka onwe gi nwee ohere iji di nwayo na ikwenye onwe gi!
Na vidiyo a, ị ga - ahụ ngwọta na ndụmọdụ ndị ga - enyere aka igbochi egwu ndị ọzọ ma mee ka ndụ gị dị mfe kwa ụbọchị ..., na ihe niile, naanị 5 isi:
1) echiche Egbula oge iche echiche n'ebe ndi mmadu ibe gi nọ.
2) Nkeotu olué : "Site n'ịchọ ime ihe na-atọ onye ọ bụla ụtọ nke ukwuu, ị ga-emecha mee onye ọ bụla obi ụtọ" ị ga-ahọrọ!
GỤỌ Igodo 5 nke nwere ike inyere gị aka ịchịkwa nchegbu ma zere nsogbu
3) Obo : ọ bụrụ na ụwa gbara gị gburugburu, ọ ga-ekwe omume ...
4) nyocha : mụta ịghaghachị ka ị ghara inwe nchekasị.
5) Nkwado : nabatara ókè ya ma gaa na ya.
Enyemaka bara uru nke ga enyere gị aka ná ndụ gị kwa ụbọchị. Enweghị m egwu ọzọ na gị?
Ịtụ Egwu Ndị Ọzọ-Gịnị Bụ Ihe Nzuzo Ịlụso Ya ọgụ? April 22nd, 2018Tranquillus
gara agaMụtakwuo ngwa ngwa ma mee ka ọ dị mma na-emetụ n'ahụ ndị nwụrụ anwụ
-esonụỊga nke ọma mgbe ọdịda
Ime Mkpebi-Ụzọ Isi Mee Nhọrọ Ziri Ezi?
Ịga nke ọma mgbe ọdịda
Mara otú e si eme mkpebi ndị ziri ezi
Chọta nguzozi n'etiti ndụ onwe onye na ọkachamara